Guqula ividiyo ibe yi-MP4 ukuya kwi-DVD kunye ne-DVD kwi-MP4 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Abasebenzisi abaninzi phakathi kuka-2000 ukuya ku-2009 baqokelele inani elikhulu leeDVD zemidlalo bhanyabhanya okanye iicwecwe ezenziwe ekhaya, ezinokujongwa njengokuhlala kakuhle esofeni nomdlali okhethekileyo. Kule minyaka ilandelayo, usetyenziso olubanzi lweenkonzo zokusasaza kunye namaqonga aphathwayo alinciphisile eli siko, ekhokelela kwiiDVD eziqokelela uthuli kwezinye iidrowa.
Ukuba sinqwenela gcina iividiyo ezifumaneka kwiDVD kwifayile yedijithali okanye ngokuchaseneyo (yiza i-MP4 kwiDVD), kwesi sikhokelo siza kukubonisa zonke iinkqubo zasimahla ezilungiselelwe ezi mfuno, ukuze ube nakho ukulawula okuphezulu kumxholo wediski ebonakalayo kunye nokugcina kunye nokulahla.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Njani Guqula ividiyo kunye neDVD kwiMP4 okanye kwiMKV kwiPC nakwiMac
Ungayiguqula njani iividiyo zeDVD kwi-MP4 (kunye neVice Versa)
Kwizahluko ezilandelayo siza kukubonisa iinkqubo zasimahla esinokuzisebenzisa kwikhompyuter yethu ukuguqula iiDiski zeVidiyo ezibonakalayo zibe ziifayile zeVidiyo zeVidiyo ngokwahlukeneyo (emva koko wenze iiVidiyo zeDVD kwenye okanye enye iMP4). Zonke iinkqubo zinokusetyenziswa ngaphandle kwemida yexesha okanye umda kubungakanani beefayile okanye iiDVD ekufuneka zenziwe, ukuze sigcine ukuthengwa kweenkqubo ezibizayo neziphelelwe lixesha.
Iinkqubo zokuguqula iDVD iye kwi-MP4
Inkqubo yokuqala esiyincomayo ukuzama ukuguqula iDVD yedijithali yiBrandBrake.
Sebenzisa le nkqubo, siqala ngokufaka iDVD kwisidlali, linda imizuzu emi-2, emva koko uqalise inkqubo kwaye ukhethe isidlali seDVD sokulayisha ividiyo.
Nje ukuba ividiyo ilayishwe kujongano, sijonga ukuba yeyiphi ividiyo nevidiyo emayigcinwe, sikhetha indlela format ifomathi MP4, Siseka njenge Misela kwangaphambili ilizwi 576p25 emva koko sicinezela phezulu Qala ukufaka iikhowudi.
Njengolunye uhlobo olusebenzayo kwiBrakeBrake singasebenzisa inkqubo yeVidCoder.
Kwi-interface elula singalayisha umxholo wayo nayiphi na iVidiyo yeDVD, ukhethe ukuba yeyiphi na iithowuni zomsindo kunye nevidiyo oza kuzigcina, ukhethe ukuba ungadibanisa imixholo engezantsi, khetha iprofayili yokuguqula (kwi Useto lokufaka iikhowudis) kwaye ekugqibeleni uguqule idiski kwifayile ye-MP4 ngokucinezela ukuguqula.
Ukuba endaweni yeefayile ze-MP4 sifuna ukugcina iVidiyo yeDVD kwiMKV (ifomathi entsha kwaye iyahambelana ne-Smart TV), singasebenzisa isixhobo sasimahla nesisebenzayo njengeMakeMKV.
Inkqubo elula ukuyisebenzisa ukuguqula iDVD ibe yifayile yevidiyo eyidijithali ayikho: ukuyisebenzisa sivula inkqubo, khetha idiski ebonakalayo apho uza kuthabatha ividiyo, ukhethe iindlela oza kuzigcina, ukhethe indlela yokugcina ifayile entsha kwaye ucinezele. Yenza i-MKV ukwenza uguquko.
Ukuba usaqala kwaye awukwazi ukusebenzisa iBrandBrake kunye neVidCoder, le yinkqubo yakho!
Guqula iDVD ekhuselweyo
Ukuba sizama ukusebenzisa iinkqubo ezimbini zokuqala ezinconyelwe apha ngasentla ngeDVD ekhuselweyo, asizukukwazi ukuguqula i-MP4, sibonile ukhuselo lokuchasana nekopi eyakhelwe kwimithombo yeendaba yoqobo kwintengiso. Inye kuphela enenkqubo esusa ukhuselo yi-MakeMKV, kodwa kungenjalo sinokusebenzisa enye yeenkqubo ozibona kwisikhokelo sethu Ezona nkqubo zilungileyo zokukopa iDVD (ukukrazula) kwiPC.
QAPHELA: ukususa ukhuselo ukwenza iikopi zakho ayilolwaphulo-mthetho, into ebalulekileyo kukuba iikopi azize zishiye indlu yethu (asinakho ukuhambisa okanye ukuzithengisa).
Iinkqubo zokuguqula i-MP4 iye kwiDVD
Kwelinye icala, sifuna inkqubo yokuzisa i-MP4 kwiDVD yeVidiyo (ke iyahambelana nabadlali beDVD yedesktop), sicebisa ukuba uzame iFreeemake Video Converter kwangoko.
Ukuyisebenzisa, faka iDVD engenanto kwirekhoda, qala inkqubo, cinezela iqhosha. Ividiyo Ekunene phezulu, khetha iifayile ze-MP4 ozokuguqula, cofa iqhosha kwiDVD bonisa apha ngezantsi kwaye ekugqibeleni uqinisekise ngaphakathi Tshisa. Kwifestile efanayo sinokukhetha ukuba senze imenyu yeDVD kunye nomgangatho wokuguqulwa, nokuba ngaba iiparameter ezisisiseko zingaphezulu ngokwaneleyo ukwenza iividiyo ezilungileyo zeDVD.
Enye inkqubo elungileyo yokuguqula i-MP4 kwi-DVD yi-AVStoDVD.
Ngale nkqubo sinokuguqula ngokukhawuleza iividiyo ze-MP4 kwifomathi ehambelana nevidiyo yeDVD, ukuze sikwazi ukutshisa kwangoko idiski ebonakalayo. Ukongeza iividiyo, cofa nje Vula, ngelixa siqala inkqubo yokuguqula sicinezela iqhosha qala.
Ukuba ujonge inkqubo egqibeleleyo nenenqaku lokuzisa i-MP4 kwiDVD, simema ukuba uzame iDVD Author Plus.
Ngayo, ungalayisha kwangoko zonke iifayile ze-MP4 kumthi wefolda eyakhelweyo ngaphandle kokuvula umphathi wefayile ngalo lonke ixesha ukugqibezela ukugqitywa kwediski ebonakalayo. Xa wethu Ibhodi yebali kuboniswe ngezantsi kugqityiwe, setha iiparameter zeDVD kwicandelo lasekunene lewindows, hit Next elandelayo kwaye ugqibezele imisebenzi yokutsha.
Ukufumana ezinye iinkqubo eziluncedo zokuguqula i-MP4 iye kwiDVD, funda eyam Isikhokelo se Guqula i-MKV kwi-AVI okanye utshise iMKV kwiDVD.
Ngeenkqubo ezidweliswe apha ngasentla sinokwenza zonke iintlobo zokuguqulwa ukusuka kwi-MP4 ukuya kwi-DVD kunye nokusuka kwi-DVD ukuya kwi-MP4, ukugcina iidiski ezibonakalayo zokunxiba kwethu kunye nokukrazula iimovie kwaye kwangaxeshanye senze iiDVD zokunika izihlobo zethu esele zikhulile okanye ukuba nazo. yeDVD player endala isasebenza.
Kwesinye isikhokelo sikubonise ezinye iinkqubo Guqula iDVD ibe yiMP4 ukuze ubukele iividiyo kwi-iPhone, ukuze iividiyo (ezivela kwiDVD) zihambelane nomdlali owakhelweyo kwi-iPhone.
Ukuba endaweni yoko singathanda ukuguqula iividiyo ukuba sizibukele kwi-Android, sikubhekisa kwisikhokelo sethu Guqula iimovie kunye neevidiyo zokujonga kwi-smartphone.